Zebedeo - Wikipedia
I Maria Salome sy i Zebzdeo mliaraka amin'ny zanany Jakoba Zokiny sy i Jiany Evanjelista.
I Zebedeo na Zebedio na Zebede, araka ireo Evanjely efatra ao amin'ny Testamenta Vaovao, dia rain'ny apostolin'i Jesoa roalahy, dia i Jakoba Zokiny sy i Joany (na Jaona), "ilay mpianatra tian'i Jesoa". Ireo boky ireo dia toa manambara an-kolaka fa vadin'i Salome izy: nefa ao amin'ny Filazantsara araka an'i Marka (Mar. 15.40), ireo vehivavy nanatrika ny fanomboana an'i Jesoa amin'ny hazo fijaliana dia lazaina fa i Maria avy any Magdala, i Maria renin'i Jakoba Zandriny, i Josefa (na Josesy) ary i Salome, ny andalana mifandraika amin'io ao amin'ny Filazantsara araka an'i Matio (Mat 27.56) dia milaza an'i Maria avy any Magdala, i Maria renin'i Jakoba sy Josefa, ary ny renin'ny zanak'i Zebedeo. Ny Rakipahalalana Katolika dia manatsoa-kevitra fa ilay Salome ao amin'ny Filazantsara araka an'i Marka (15.40) sy ny renin'ny zanak'i Zebedeo ao amin'ny Matio dia mety olona iray ihany.
Atao hoe Ζεβεδαῖος / Zebedaios, izy amin'ny teny grika, fa זְבַדְיָה‎ / Zvad'yah kosa amin'ny teny hebreo.
Tsy misy zava-pantatra firy ny momba azy, afa-tsy ny mety fisahanany raharaham-panaratoana sy fananany mpiasa nanampy azy (Mar. 1.19-20). Rehefa notaomin'i Jesoa hanaraka azy ireo zanany lahy dia niara-nirotsaka nanarato miaraka amin'izy ireo izy (Mat. 4.21-22) angamba teny amin'ny rano lalin'i Genesareta. Izany fikambanany hanarato miaraka amin'ny fianakavian'i Petera (na Piera) sy Andrea izany dia azo anatsoahan-kevitra fa niorim-ponenana tao amin'ny tapany avaratr'i Galilea izy, satria tamin'izany fotoana izany ry Petera sy ry Andrea dia nonina tao Kafarnahoma (na Kapernaomy) na dia avy any Betsaida aza izy ireo. Navelan'i Zebedeo handeha ireo zanany tamin'ny fotoana niantsoan'i Jesoa azy ireo hanaraka azy: tokony ho isan'ireo olona niandry ny fiavian'ny Mesia izy ireo.
↑ 1,0 et 1,1 "Ary nisy vehivavy koa nitsinjo teny lavidavitra eny, ary isan' ireny Maria Magdalena sy Salome ary Maria, renin' i Jakoba kely sy Josesy." (Mar. 15. 40, Ny Baiboly) "Ary nisy vehivavy nijery teny lavidavitra teny koa; anisan' ireny Maria Madelena, sy Maria renin' i Jakoba zandriny sy Josefa, ary koa Salome" (Mar. 15.40, Ny Baiboly Masina)
↑ Ary nisy vehivavy maro nitsinjo teny lavitra eny, izay nanaraka an' i Jesosy hatrany Galilia ka nanompo Azy. Isan' ireny Maria Magdalena sy Maria, renin' i Jakoba sy Josesy, ary ny renin' ny zanak' i Zebedio. (Mat. 27.55-56, Ny Baiboly) Nisy vehivavy maromaro koa nitazana teny lavidavitra teny, dia ireo izay nanaraka an' i Jeso sy nanompo azy hatrany Galilea: anisan' ireo Maria Madelena, sy Maria renin' i Jakoba sy Josefa, ary ny renin' ny zanak' i Zebede. (Mat. 27.55-56, Ny Baiboly Masina)
↑ "Ary rehefa nandroso kelikely Izy, nahita an' i Jakoba, zanak' i Zebedio, Jaona rahalahiny, izay teo an-tsambokely koa namboatra ny haratony. Dia niantso azy niaraka tamin' izay Izy; ary izy mirahalahy nandao an' i Zebedio rainy teo an-tsambokely mbamin' ny olona nokaramainy, ka dia nanaraka an' i Jesosy." (Mar. 1.19-20, Ny Baiboly) "Nony nandeha kelikely izy, dia nahita an' i Jakoba zanak' i Zebede sy Joany rahalahiny, izay teo an-tsambo kely koa nanamboatra ny haratony. Dia niantso azy niaraka tamin' izay izy, ka nilaozan' izy mirahalahy teo an-tsambo keliny Zebede rainy sy ny mpikaramany, fa lasa nanaraka an' i Jeso izy." (Mar. 1.19-20, Ny Baiboly Masina)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Zebedeo&oldid=977553"
Voaova farany tamin'ny 21 Novambra 2019 amin'ny 11:33 ity pejy ity.